အိမ်သုံးပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ တစ်ညတည်းအမီ နေလောင်ဒဏ်ကိုကုစားမယ်
13 Apr 2018 . 7:06 PM
အကြိုနေ့တစ်ရက်တော့ ဖြတ်သန်းပြီးသွားပြီမလား အခရာရဲ့ ပရိသတ်တို့ရေ။ သင်္ကြန်ကလည်း အားရစရာ ၄ ရက်ကြီးတောင် ကဲရသောင်းကျန်းရဦးမှာဆိုတော့ အသားအရေကိုလည်း နိုင်သလောက်လေး ထိန်းသိမ်းရဦးမှာပေါ့။ တစ်နေကုန်ရေတွေထိ၊ နေလောင်ဒဏ်တွေခံရ၊ ခွက်စောင်းတွေခုတ်၊ မီးသတ်ပိုက်ဒဏ်တွေနဲ့ဆိုတော့ နေလောင်ခံရ၊ ရေဒဏ်နူးအိနေတဲ့ အသားအရေလေးတွေကို တရက်ဆိုတရက်အမီ နောက်တရက်အတွက် အားပြန်ဖြည့်ရအောင်လို့ အိမ်မှာပဲအလွယ်တကူရတဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်းလေးတွေသုံးပြီး တစ်ညတည်းနဲ့ အသားအရေပြန်ကောင်းအောင်ဖန်တီးကြရအောင်။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီအသီးအနှံ ဒီပစ္စည်းလေးတွေပဲလိုပါသတဲ့။
အာလူးကတော့ အသားအရေအတွက် တကယ်ထိရောက်တဲ့ ဆေးကောင်းတစ်လက်ပါ။ အာလူးရဲ့ အညိုအမဲစုပ်ယူပေးတဲ့ ဓါတ်သတ္တုတွေကြောင့် အသားအရည် ညိုမဲသွားတာတွေအတွက်တော့ အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ အာလူးကို အကွင်းလိုက်ပါးပါးလေးတွေလှီးပြီး မျက်နှာနဲ့နေလောင်ဒဏ်ခံရတဲ့အပိုင်းတွေကို အသားထဲစိမ့်ဝင်တဲ့အထိပွတ်တိုက်ကပ်ထားပေးရုံပါပဲ။
သခွားသီးလောက်ကောင်းတဲ့ သဘာဝ Sunscreen မျိုးမရှိသေးပါဘူး။ နေလောင်ခံရတဲ့ နေရာတွေကို သခွားသီးလေး ပါးပါးလှီးပြီးကပ်ထားလိုက်ရင်တော့ လန်းဆန်းတဲ့ရနံ့လေးနဲ့အတူ အမြန်ဆုံးကုစားပေးနိုင်မှာပါတဲ့။
ပွန်းပဲ့နီရဲဒဏ်ရာတွေအတွက်တော့ ခရမ်းချဉ်သီးက ရတနာတစ်ပါးပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးကိုလည်း အကွင်းလိုက်လေးတွေလှီးပြီး မျက်နှာနဲ့နေလောင်ဒဏ်ခံရတဲ့နေရာတွေကို ကပ်ပေးရုံနဲ့ အသားအရေပြန်လည်ဝင်းပစိုပြေလာပါလိမ့်မယ်။
နေလောင်ဒဏ်ကြောင့် အရေပြားတွေစပ်နေတာကို ကုသရာမှာ စတော်ဘယ်ရီက မရှိမဖြစ်ပါ။ ဘာကြောင့်ပါလိမ့်? သူ့မှာ နာကျင်မှုတွေကို လျော့နည်းသက်သာစေတဲ့ tannic acid ပါဝင်တာကြောင့်ပါတဲ့။ အသုံးပြုပုံကတော့ စတော်ဘယ်ရီသီးလေးတွေကို ခပ်ပါးပါးလှီး၊ နေလောင်ဒဏ်ရာပေါ်အုံထားပြီး မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါ ရေနဲ့သေချာဆေးကြောလိုက်ရုံပါပဲ။
(၅) ဗီတာမင် စီပါတဲ့ အစားအစာတွေ
အကယ်လို့များ နေလောင်ဒဏ်က နီနေတုန်း၊ ဖြစ်တာသိပ်မကြာသေးဘူးဆိုရင် antixoidiant နဲ့ vitamin C ပါဝင်တဲ့ ဘလူးဘယ်ရီသီး၊ စတော်ဘယ်ရီသီး၊ ချယ်ရီသီး အစရှိတဲ့ အစားအစာတွေစားသင့်ပါတယ်။
သူတို့ကိုစားပေးခြင်းအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်မှုကို လျှော့ချပေးတာမို့ အသားအရေမွဲခြောက်ခြောက်မဖြစ်တော့ပဲ ဒဏ်ရာအမြန်သက်သာစေပါတယ်။
ဆလတ်ရွက်ကလည်း အသားအရေကို ပြန်ကုစားပေးနိုင်တယ်ဆို အံ့သြသွားပြီမဟုတ်လား? သူကတော့ ရေပက်ခံရလို့ ပွန်းပဲ့နေတဲ့အသားအရေအတွက် သက်သာစေတဲ့သဘာဝဆေးပါ။ ဆလတ်ရွက်ကို ကြိတ်ပြီးရတဲ့အရည်ကို ရေခဲသေတ္တာထဲအအေးခံထားပြီး အဲ့အရည်လေးကို ပွန်းပဲ့ခံရတဲ့အသားရေပေါ် ဂွမ်းစလေးနဲ့ ပွတ်လိမ်းထားပေးရုံနဲ့ ပွန်းပဲ့ဒဏ်၊နေလောင်ဒဏ်တွေ သက်သာစေမှာပါ။
နေလောင်တာအတွက်တော့ အကောင်းဆုံးဆို တခြားပြေးမကြည့်ပါနဲ့။ ရှားစောင်းလက်ပတ်ကတော့ ဒီသင်္ကြန်အတွက် ဝယ်ကိုစုထားသင့်တဲ့အရာပါ။ အပင်ကတိုက်ရိုက်ခုတ်ယူထားတဲ့ အစေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပရဆေးဆိုင်တွေကဖြစ်ဖြစ် သဘာဝရှားစောင်းလက်ပတ်ကို အအေးခံပြီး နေလောင်ခံရတဲ့အသားအရေပေါ် ချက်ချင်းလိမ်းပေးရုံနဲ့ သိသိသာသာ သက်သာစေမှာပါ။
လက်ဖက်ရည်ကိုလည်း နေလောင်တာတွေအတွက် ချန်ထားလို့မရဘူးနော်။ Tea Bag အိတ်လေး ၃,၄ အိတ်ကိုရေနွေးဆူဆူပန်းကန်လုံးထဲ စိမ်ထားပြီး အရောင်မဲလာပြီဆိုတာနဲ့ အထုတ်လေးတွေဖယ်ပြီး နေလောင်ခံရတဲ့နေရာတွေကို အရည်သီးသန့်လေးနဲ့ ပွတ်လိမ်းပေးပါ။ အဲ့အထုတ်လေးတွေနဲ့ အရည်ထဲစိမ်ပြီး ပွတ်လိမ်းလည်းရပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ရေမဆေးဘဲ အဲ့အတိုင်းတညလုံးထားပေးရုံပါပဲ။
ဒီလောက်ဆို အဆိုးရွားကြီး အသားအရေ ပျက်စီးမနေတော့ဘဲ တစ်ရက်ဆိုတစ်ရက် ကိုယ့်အသားအရေလေးကို တတ်နိုင်သလောက် ပြန်ကုစားလို့ရပြီနော်။ တစ်နေကုန်ရေဆော့လာရလို့ပင်ပန်းတယ်ဆိုပြီးတော့တော့ တန်းမအိပ်လိုက်နဲ့ဦးပေါ့။ အသားအရေအတွက်လည်း အချိန်ပေးသင့်တယ်မလား။ ဒါဆို ဒီစာလေးဖတ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲမွှေရှာပြီး အမြန်ဆုံးလုပ်လိုက်ကြတော့နော်။
အိမျသုံးပစ်စညျးလေးတှနေဲ့ တဈညတညျးအမီ နလေောငျဒဏျကိုကုစားမယျ
အကွိုနတေ့ဈရကျတော့ ဖွတျသနျးပွီးသှားပွီမလား အခရာရဲ့ ပရိသတျတို့ရေ။ သင်ျကွနျကလညျး အားရစရာ ၄ ရကျကွီးတောငျ ကဲရသောငျးကနျြးရဦးမှာဆိုတော့ အသားအရကေိုလညျး နိုငျသလောကျလေး ထိနျးသိမျးရဦးမှာပေါ့။ တဈနကေုနျရတှေထေိ၊ နလေောငျဒဏျတှခေံရ၊ ခှကျစောငျးတှခေုတျ၊ မီးသတျပိုကျဒဏျတှနေဲ့ဆိုတော့ နလေောငျခံရ၊ ရဒေဏျနူးအိနတေဲ့ အသားအရလေေးတှကေို တရကျဆိုတရကျအမီ နောကျတရကျအတှကျ အားပွနျဖွညျ့ရအောငျလို့ အိမျမှာပဲအလှယျတကူရတဲ့ အိမျသုံးပစ်စညျးလေးတှသေုံးပွီး တဈညတညျးနဲ့ အသားအရပွေနျကောငျးအောငျဖနျတီးကွရအောငျ။ ဒါဆိုရငျတော့ ဒီအသီးအနှံ ဒီပစ်စညျးလေးတှပေဲလိုပါသတဲ့။
အာလူးကတော့ အသားအရအေတှကျ တကယျထိရောကျတဲ့ ဆေးကောငျးတဈလကျပါ။ အာလူးရဲ့ အညိုအမဲစုပျယူပေးတဲ့ ဓါတျသတ်တုတှကွေောငျ့ အသားအရညျ ညိုမဲသှားတာတှအေတှကျတော့ အသငျ့တျောဆုံးပါပဲ။ အာလူးကို အကှငျးလိုကျပါးပါးလေးတှလှေီးပွီး မကျြနှာနဲ့နလေောငျဒဏျခံရတဲ့အပိုငျးတှကေို အသားထဲစိမျ့ဝငျတဲ့အထိပှတျတိုကျကပျထားပေးရုံပါပဲ။
သခှားသီးလောကျကောငျးတဲ့ သဘာဝ Sunscreen မြိုးမရှိသေးပါဘူး။ နလေောငျခံရတဲ့ နရောတှကေို သခှားသီးလေး ပါးပါးလှီးပွီးကပျထားလိုကျရငျတော့ လနျးဆနျးတဲ့ရနံ့လေးနဲ့အတူ အမွနျဆုံးကုစားပေးနိုငျမှာပါတဲ့။
ပှနျးပဲ့နီရဲဒဏျရာတှအေတှကျတော့ ခရမျးခဉျြသီးက ရတနာတဈပါးပါ။ ခရမျးခဉျြသီးကိုလညျး အကှငျးလိုကျလေးတှလှေီးပွီး မကျြနှာနဲ့နလေောငျဒဏျခံရတဲ့နရောတှကေို ကပျပေးရုံနဲ့ အသားအရပွေနျလညျဝငျးပစိုပွလောပါလိမျ့မယျ။
နလေောငျဒဏျကွောငျ့ အရပွေားတှစေပျနတောကို ကုသရာမှာ စတျောဘယျရီက မရှိမဖွဈပါ။ ဘာကွောငျ့ပါလိမျ့? သူ့မှာ နာကငျြမှုတှကေို လြော့နညျးသကျသာစတေဲ့ tannic acid ပါဝငျတာကွောငျ့ပါတဲ့။ အသုံးပွုပုံကတော့ စတျောဘယျရီသီးလေးတှကေို ခပျပါးပါးလှီး၊ နလေောငျဒဏျရာပျေါအုံထားပွီး မိနဈအနညျးငယျကွာတဲ့အခါ ရနေဲ့သခြောဆေးကွောလိုကျရုံပါပဲ။
(၅) ဗီတာမငျ စီပါတဲ့ အစားအစာတှေ
အကယျလို့မြား နလေောငျဒဏျက နီနတေုနျး၊ ဖွဈတာသိပျမကွာသေးဘူးဆိုရငျ antixoidiant နဲ့ vitamin C ပါဝငျတဲ့ ဘလူးဘယျရီသီး၊ စတျောဘယျရီသီး၊ ခယျြရီသီး အစရှိတဲ့ အစားအစာတှစေားသငျ့ပါတယျ။
သူတို့ကိုစားပေးခွငျးအားဖွငျ့ ခန်ဓာကိုယျတှငျး ရဓောတျခမျးခွောကျမှုကို လြှော့ခပြေးတာမို့ အသားအရမှေဲခွောကျခွောကျမဖွဈတော့ပဲ ဒဏျရာအမွနျသကျသာစပေါတယျ။
ဆလတျရှကျကလညျး အသားအရကေို ပွနျကုစားပေးနိုငျတယျဆို အံ့သွသှားပွီမဟုတျလား? သူကတော့ ရပေကျခံရလို့ ပှနျးပဲ့နတေဲ့အသားအရအေတှကျ သကျသာစတေဲ့သဘာဝဆေးပါ။ ဆလတျရှကျကို ကွိတျပွီးရတဲ့အရညျကို ရခေဲသတ်ေတာထဲအအေးခံထားပွီး အဲ့အရညျလေးကို ပှနျးပဲ့ခံရတဲ့အသားရပေျေါ ဂှမျးစလေးနဲ့ ပှတျလိမျးထားပေးရုံနဲ့ ပှနျးပဲ့ဒဏျ၊နလေောငျဒဏျတှေ သကျသာစမှောပါ။
နလေောငျတာအတှကျတော့ အကောငျးဆုံးဆို တခွားပွေးမကွညျ့ပါနဲ့။ ရှားစောငျးလကျပတျကတော့ ဒီသင်ျကွနျအတှကျ ဝယျကိုစုထားသငျ့တဲ့အရာပါ။ အပငျကတိုကျရိုကျခုတျယူထားတဲ့ အစေးပဲဖွဈဖွဈ၊ ပရဆေးဆိုငျတှကေဖွဈဖွဈ သဘာဝရှားစောငျးလကျပတျကို အအေးခံပွီး နလေောငျခံရတဲ့အသားအရပေျေါ ခကျြခငျြးလိမျးပေးရုံနဲ့ သိသိသာသာ သကျသာစမှောပါ။
လကျဖကျရညျကိုလညျး နလေောငျတာတှအေတှကျ ခနျြထားလို့မရဘူးနျော။ Tea Bag အိတျလေး ၃,၄ အိတျကိုရနှေေးဆူဆူပနျးကနျလုံးထဲ စိမျထားပွီး အရောငျမဲလာပွီဆိုတာနဲ့ အထုတျလေးတှဖေယျပွီး နလေောငျခံရတဲ့နရောတှကေို အရညျသီးသနျ့လေးနဲ့ ပှတျလိမျးပေးပါ။ အဲ့အထုတျလေးတှနေဲ့ အရညျထဲစိမျပွီး ပှတျလိမျးလညျးရပါတယျ။ ပွီးရငျတော့ရမေဆေးဘဲ အဲ့အတိုငျးတညလုံးထားပေးရုံပါပဲ။
ဒီလောကျဆို အဆိုးရှားကွီး အသားအရေ ပကျြစီးမနတေော့ဘဲ တဈရကျဆိုတဈရကျ ကိုယျ့အသားအရလေေးကို တတျနိုငျသလောကျ ပွနျကုစားလို့ရပွီနျော။ တဈနကေုနျရဆေော့လာရလို့ပငျပနျးတယျဆိုပွီးတော့တော့ တနျးမအိပျလိုကျနဲ့ဦးပေါ့။ အသားအရအေတှကျလညျး အခြိနျပေးသငျ့တယျမလား။ ဒါဆို ဒီစာလေးဖတျပွီး ရခေဲသတ်ေတာထဲမှရှောပွီး အမွနျဆုံးလုပျလိုကျကွတော့နျော။